बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेपछि धरानस्थित बराह सहकारी सञ्चालक विरुद्ध आन्दोलन ! | Diyopost - ओझेलको खबर बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेपछि धरानस्थित बराह सहकारी सञ्चालक विरुद्ध आन्दोलन ! | Diyopost - ओझेलको खबर
बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेपछि धरानस्थित बराह सहकारी सञ्चालक विरुद्ध आन्दोलन !
दियो पोस्ट मंगलबार, चैत्र २२, २०७८ | १६:३९:३१
काठमाडौं । धरानमा रहेको बराह समुह अन्तर्गत रहेको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालकहरुले सर्वसाधरणको करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेपछि तनाव भएको छ । मंगलबार सर्वसाधरणले धरानस्थित सहकारीको भवन घेराबन्दी गरेका छन् । सहकारीले आज अर्थात चैत्र २० गते रकम लिनका लागि सर्वसाधरणलाई सुचना दिएको थियो । सुचना अनुसार रकम लिन गएकाहरुले रकम नपाएपछि आन्दोलन चर्किएको हो ।
सहकारीबाट पीडित भएकाहरुको आन्दोलनमा साथ दिन पुगेका हर्क साम्पाङ राईका अनुसार सहकारीले पीडितहरुको अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ । ‘धरानबासीले एउटा विश्वासले यो सहकारीमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा गरेका रहेछन् । उक्त रकम नदिने नियतले कुकृत्य गरिएको रहेछ । त्यसको विरुद्ध म सडकमा आएको हुँ । बराहको नेपाल बाहिर युके, हङकङ लगायत स्थानमा समेत शाखा खोलिएको छन्ने छ । यहाँ पनि यत्रो घर रहेछ । यति धेरै सम्पत्ति भएको सहकारीले सहकारीमा बचतकर्ताहरुको पैसा नदिनु बदनियत हो,’ उनले भने,‘यहाँ एक लाखदेखि ३० चालिस करोडसम्म छ भन्ने सुनिएको छ । यहाँ सर्वसाधरणलाई प्रहरी लगाएर छेक्ने तर संचालकहरु माथि बस्ने गरिएको छ ।’
सहकारी संचालकहरुले बचत रकम फिर्ता नदिएको विषयमा यसअघि नै खबर प्रकाशन भएको थियो । बचतकर्ताले घेरा हालेपछि सहकारीका संचालक तथा अध्यक्ष मानबहादुर दियाली सम्पर्क विहिन छन् ।
तर, दियोपोस्टले दियालीको नम्बरमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनलाई सम्पर्क हुन सकेन ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा भने सहकारीका संचालकहरु प्रहरीको सम्पर्कमै रहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरु भाग्नु भएको छैन । आज अलिकति धेरै निक्षेपकर्ता आएर सहकारी भवन अगाडी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सहकारीका संचालक र निक्षपकर्ताबीच वार्ता चलिरहेको छ,’ थापाले दियोपोस्टसँग भने,‘बचतकर्ताले सावाँ र बचत रकम नपाएको साँचो हो । यो समस्या आएपछि हामीले पनि आफ्नै हिसाबले शान्ति सुरक्षामै खलल पुग्छकी भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
थापाका अनुसार निक्षपकर्ताले प्रहरीमा सहकारी विभाग मार्फत जाहेरी वा निवेदन लिएर आए कानुन अनुसार कारबाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
संचालकहरुले बराह ग्रुप अफ कम्पनि अन्तर्गत सहकारीलाई राखेका छन् । जसको धरानमा बराह इण्डस्ट्रिज प्रालि अन्तर्गत भानुचोकमा र धनकुटे रोडमा करोडौंको सपिङ कम्पलेक्स सञ्चालन गरेको छ । यस्तै काठमाडौंको न्यूरोडमा, पोखराको चिप्लेढुङ्गा र चितवनको नारायणघाटमा शाखाहरू छन् । विदेशमा हङकङको जोडर्नमा, दुबईमा र बेलायतको अल्डरसटमा पनि शाखा छन् । स्रोतका अनुसार सहकारी संचालकहरुले बचतकर्ताको रकम घर जग्गामा लगानी गरेका कारण रकम अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले सहकारीको कारोबारमा समेत रोक लगाएको छ ।
सहकारी सदस्यहरुले १० हजार देखि ४० करोडसम्म उक्त सहकारीमा जम्मा गरेका छन् ।
सहकारी सञ्चालकहरुका कारण कतिपय ऋणी मानसिक रोगी समेत भएका छन् । उक्त सहकारीमा सहकारीमा पूर्व ब्रिटिस लाहुरेहरुले समेत लाखौँ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । जीवनभरी बेलायतमा गोलाबारुदसँग खेलेर कमाएको रकम समेत सहकारी सञ्चालकहरुले खाइदिने पीडामा उनीहरु छन् । बराह समुहमा सहकारीसहित अभिमत सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेड, दुबईमा अल बराह मिनी मार्केट एलएलसी, बराह बालसंसार, बराह ज्वेलरी इण्डस्ट्रिज प्रालि, बराह फेमिली किचन, चितवनमा नारायणी बराह ज्वेलरी नारायणी, गोर्खा बराह ज्वेलरी पोखरा, इन्द्र बराह ज्वेलरी हङकङ, इन्द्र बराह ट्राभल्स एण्ड टुर्स, कृपा दृष्य डिजिटल प्रालि रहेका छन् ।
यी सबैको अध्यक्ष भने शिव लामिछाने हुन् । लामिछाने समेत सम्पर्क विहिन भएको आरोप छ ।
मंगलबार, चैत्र २२, २०७८ | १६:३९:३१